> Resource > Mac barnaamijyo la mid ah> PhotoRec lagu bedelan karo iyo Mac
The Mac OS X ayaa aad caan u noqday maalmahan sida dad badan ay bilaabaan si loogu badalo in ay Apple. The Mac OS X waa madal Linux ka dul dhisay, iyo siisaa khibrad la xiriirta kombiyuutarka aad u siman. Si kastaba ha ahaatee, in macnaheedu ma aha in waxa lagu ogaan karaa khaladaad aadanaha. Haddii aad si qalad ah u tirtirto gal ah sawirada aad Mac, waxa aad samaysid si aad dib waxaad iyaga keentaa? Dadka intooda badan waxay aaminsan yihiin in mar bin qashinka ayaa weelna, iyagoo xogta ayaa weligood laga badiyay. Si kastaba ha ahaatee, ilaa iyo xogta ayaa la overwritten ku kooxahaasi isku mid, waxaa lagama badin. PhotoRec waa mid ka mid ah barnaamijyada kaa caawin kara soo kabsado xogta aad. Haddii aad raadineyso bedelka wanaagsan PhotoRec, Mac OS X ayaa dhowr barnaamij oo uu ka soo xusho. Halkan waxaa ku qoran dhowr ah:
PhotoRec duwan oo loogu talagalay Mac 1: Photo Recovery for Mac
PhotoRec duwan oo loogu talagalay Mac 2: Data Recovery for Mac
kale PhotoRec u Mac 3: Dr.Fone ee macruufka (Mac)
Wondershare Photo Recovery for Mac waa qalab weyn si ay u isticmaalaan marka ay timaado soo kabsaday sawirada iyo sawirada ah ayaa mar ku kaydsan on your computer. Siiyaa xogta aan la overwritten aad disk adag, Wondershare Photo Recovery for Mac awood u kabsaday xogta daqiiqado yar gudahood. Faa'iido kale oo weyn oo la isticmaalayo Wondershare Photo Recovery for Mac waa in ay kuu ogolaanaya in aad ku eegaan sawirada ama videos in la doonayo in la soo kabsaday, oo aad isticmaali karto nidaamka sixitaanka fudud in ay doortaan faylasha in aad rabto in aad soo kabsado. Halkan waxaa ku qoran qaar ka mid ah sifooyinka ugu wanaagsan;
- Ladnaansho sawirada, video files iyo files audio.
- Hababka Recovery Deep si buuxda ayay uga bogsadaan sawiro, iwm
- shaqo kuma sameeyo koob kasta si ay xogta jirta.
- sidoo kale soo kaban karaa xogta ka storage devices dibadda.
1. Helay nooc kasta oo qaabab sawirka si fudud
2. Hawl akhri oomacnuhu si khasaare ku dhicin
3. Falanqeynta image files
1. Kaliya kabanayso photos, video iyo files audio
Wondershare Ayaa Data Recovery for Mac waa aalad kabashada xogta aad u awood badan in loogu talagalay in lagu soo kabsado jiray cayn kasta oo xogta. Waxay bixisaa taageero kala duwan badan ee qaabab kala duwan (in ka badan 550), iyo nidaamka dib u soo kabashada qoto dheer keeni karaan xogta dib formatted, lumo ama la tirtiray arrin daqiiqo gudahood. Halkan waxaa ku qoran qaar ka mid ah qaababka ugu wanaagsan ee Wondershare Data Recovery for Mac:
- Xogta Kulanka Xiisaha Leh hor soo kabashada.
- Nidaamka Recovery Deep u ogolaanaya dhamaystiran xijaab soo kabashada iyo sidoo.
- soo kabashada Data waxaa loo sameeyaa arrin daqiiqo gudahood.
- Read oo keliya, sidaa darteed aysan u dhaawici nidaamka aad file ama drive adag.
- Archives, videos, sawiro iyo Koox ka mid ah qaabab kale file si fudud loo soo kabsaday karo.
1. La socon in ka badan 550 qaabab xogta
2. Oggolaanayaa kabashada previewing
3. Waxa uu ka shaqeeyaa on a qaab akhri oo kaliya
Wondershare Ayaa Dr.Fone ee macruufka (Mac iPhone Data Recovery) waxaa loogu tala galay inuu ka soo kabsado xogta ka iDevice kasta oo kor qarnigii 4aad. Dhammaan iPod taaban 4, mobiilka iPhone ama kor of 3GS iPhone iyo iPad 1 iyo wixii ka sareeya la jaanqaadaan. Halkan waxaa ku qoran qaar ka mid ah sifooyinka wanaagsan:
- qaado 15 nooc oo ah xogta la tirtiro iyada oo aan xitaa lagu gurmad Lugood.
- Recovery waxaa loo sameeyaa in daqiiqo.
1. Xogta kabanayso wax ku ool ah ka iPhone, iPad iyo iPod taaban
2. Waxa kale oo Macdan karaa hayaan